जय कुर्सी !
नवराज कुँवर उदयपुर, २२ वैशाख
आज कुर्सी प्रतापमाथि चर्चा गरौँ । तपाईंमध्ये कतिलाई थाहा छ, अब हाम्रो मुलुक कृषिप्रधान रहेन, कुर्सीप्रधान भइसक्यो । यसलाई ‘प्रमोसन’ मान्नुहुन्छ कि ‘डिमोसन’, यो तपाईंको कुरा हो । तर, हाम्रो देशमा हर काेहीका लागि कुर्सीभन्दा ठूलो अर्को कुनै उपलब्धि छैन, गन्तव्य छैन, ड्रिम प्रोजेक्ट छैन ।
केही सातायता सत्तारूढ नेकपाभित्र कुर्सीकै कारण भूकम्प आएको छ । ढल्नढल्न लागेको घर कुर्सीकै कारण जोगिएको छ । सुन्न, भन्न र महसुस गर्दा पनि कति अप्ठ्यारो हगि ? २ अध्यक्ष बस्ने कुर्सीमा भेदभाव भयो रे ! एकै खालको धातुले बनेको, उस्तै तौल, हाइट, रङ भएको कुर्सी ठ्याक्कै दूरी मिलाएर राख्नुपर्ने, नभए मन दुख्ने, चित्त फाट्ने ।
यी सबै कुरालाई नियालिरहेको मलाई लागिरहेको छ, यत्रो शक्तिशाली त्यो कुर्सीमा सास र आत्मा हुन्थ्यो भने के सोच्थ्यो होला ?
वरिष्ठ अध्यक्ष बस्ने कुर्सीले कनिष्ठ अध्यक्षलाई हेप्थ्यो होला । कनिष्ठ अध्यक्ष बस्ने कुर्सीले स्थायी कमिटी सदस्य बस्ने कुर्सीलाई आफूभन्दा कम हैसियतको देख्थ्यो होला । केन्द्रीय सदस्य बस्ने कुर्सीको ‘मक्सद’ स्थायी कमिटी सदस्यको जस्तो हैसियत बनाउँछु भन्ने हुन्थ्यो होला ।
सबैभन्दा उच्च पदको व्यक्ति बस्ने कुर्सीले कसैलाई गन्दैनथ्यो होला । ‘ठूला’हरू बस्ने कुर्सी पूरै सामन्ती हुन्थे होलान् । झन् सुनले बनेको सिंहासनले त यी वरिष्ठ, कनिष्ठ अध्यक्ष बस्ने कुर्सीलाई कारिन्दा बनाउँथ्यो होला । धेरै हेपिएपछि साना पिराले ठूला कुर्सीमाथि कहिलेकाहीँ जुत्ता पनि बर्साउँथे हाेलान् । ए साँच्चि, कुर्सीले जुत्ता लगाउँदैन क्यारे ! जे हाेस्, पिराले विद्राेह त पक्का गर्थे हाेलान् ।
जुत्ताको विद्रोह !
तर, के थाहा, कुर्सीले इमानदारी पो देखाउँथ्यो कि ! आफूभन्दा साना बस्ने कुर्सीलाई पनि आदर गर्थ्यो होला । हामी कोही सुनले, कोही पितल, काठ, फलाम, आल्माेनियम, कोही रुवाले बनेका छाैँ, तर, हामी एउटै प्रजातिका हौँ र हाम्रो प्रयोग एउटै प्रयोजनका लागि हुन्छ भन्दै मिलेर पो बस्थे कि !
खैर, कुर्सीमा न सास हुन्छ, न आत्मा, त्यसले के सोच्न सकोस् ! यहाँ सास भएकाहरूले नै सोच्न सकेका छैनन् ।
हाम्रो देशमा कुर्सीको लडाइँ धेरै पुरानो हो । नेपालको इतिहासमाथि एकछिन घोत्लिने हो भने कुनै राजा कालगतिले मरेकाे पाइँदैन । थुप्रै राणाहरू मरे/मारिए । यी सबैको कारण कुर्सी नै थियो ।
हाम्रा देशका नेताहरूलाई हेरौँ, कुर्सीमा बसुञ्जेल कति प्रसन्न हुन्छन् । काम जस्तोसुकै गरुन्, प्रतिक्रिया जस्तोसुकै आओस्, कुर्सीमोहले छोपिसकेपछि केहीको ख्याल हुँदैन । जतिसुकै इमानदार कुरा किन नगरोस्, केही गर्छु भनेर कुर्सीमा चढेको व्यक्ति केही दिनलगत्तै जसरी पनि कुर्सी जोगाउने खेलमा लागिहाल्छ ।
कुर्सीबाट उत्रिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो भने त्यसलाई जोगाउन सानोतिनो ज्वरो त के महामारीले समेत रोक्दैन । कोरोना महामारीका बीच हालै मात्र अध्यादेश प्रकरणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘कुर्सी समा अहिले’ बनायो । कुर्सीमा चढ्ने महत्वाकाङ्क्षाले वामदेवलाई ‘बा देउ’ बनायो । अरु थुप्रैमा कुर्सी गुम्ने डर र कुर्सीप्रतिको भोक जुर्मुराएको छ ।
कुर्सीका लागि भइरहेको यस्तो लडाइँ नेकपाभित्र मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसदेखि हालै जन्मिएको जनता समाजवादी पार्टीसम्म चलिरहेको छ ।
फेरि, नेपालमा मात्र होइन नि, पूरै विश्वमै ‘कुर्सी युद्ध’ निकै चाखलाग्दो छ । सिंहासन सुनले बनेको हुन्छ । तथापि, सिंहासन एक कुर्सी नै हो । तर, राजा रिटायर हुँदैनन् । कहिलेकाहीँ यसले पनि पीडा दिन्छ । इङ्ल्यान्डमा हेरौँ न, के भइसक्यो । राजकुमार कुर्दाकुर्दै बुढो भइसके । यहाँसम्म कि उनका छोरासमेत जवान भइसके । तर, रानीले कुर्सी छोडे न राजकुमारको पालो आउने हो ! जब राजकुमारकै पालो आएको छैन भने उनको छोराको पालो कसरी आउँथ्यो !
हाम्रोतिर युवाले पालो पाएनन्, नेतृत्वमा आएनन् भन्ने गुनासो धेरै सुनिन्छ । यसरी गुनासो गर्नेले खै बुझेको कुर्सीको प्रताप ? रोगी, वयोवृद्ध पनि त्यतिकै कुर्सीका लागि दौडिन्छन् ?
नेता मात्रै कहाँ हो र, रिटायर भइसकेका कर्मचारीमा समेत कुर्सीप्रतिको मोह गज्जबको पाइन्छ । अफिसर रिटायर भयो । कार्यालको कुर्सीबाट उत्रिइसक्यो । तर, मनको कुर्सीबाट अझै उत्रिन सकेको हुँदैन । प्रहरीका आईजी भइसकेका सर्वेन्द्र खनाललाई हेरौँ । अख्तियारको आयुक्त बस्ने कुर्सीको लोभमा गतिविधि गर्दा उनीमाथि सांसद अपहरणजस्तो गम्भीर राजनीतिक आरोप लागेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सी रक्षा गर्ने बहानामा आफ्नो कुर्सी टुंगो लगाउँदै गरेका महेश बस्नेतलाई ‘सांसदको अपहरण गर्ने सांसद’ भनिँदै छ । यद्यपि, उनीहरूलाई यसको मतलब छैन । यही ‘आरोप’ले उनीहरूतिर कुर्सी नजिकिन्छ । किनकि, उनीहरूलाई कुर्सीहीन जनताले गाली गरेका हुन्, कुर्सीवालाले होइन ।
कुर्सी त मन्दिर जस्तो हो । त्यसमा एउटा भगवान् (पद)को स्थापना हुन्छ । प्राण, प्रतिष्ठा हुन्छ । हरेक कुर्सीको चारैतिर एक परिक्रमा मार्ग हुन्छ । जसले कुर्सीको परिक्रमा गर्दैन, त्यो व्यक्तिको काम अड्किन्छ, जीवनमा अघि बढ्न मुस्किल हुन्छ ।
परिक्रमा मार्ग नै काम गराउने वा सफल हुने मार्ग हो । अब यति शक्तिशाली कुर्सीबाट उत्रिन कसलाई मन हुन्छ होला त ! जब उत्रिने समय आउँछ, ठूलो पीडा सुरू हुन्छ । मनले भन्छ– केही समय अझै बस्नुपर्छ । कुर्सीमा चढ्दा जति उत्साह पैदा हुन्छ, उत्रिँदै गर्दा उति नै पीडा । त्यसैले उत्रिनबाट जोगिन नेताले कुनै कसर छाड्दैनन् । चाहे देश र जनता जति नै ठूलो महामारीसँग जुधिरहेका किन नहुन् ।
त्यसैले कुर्सीको महिमा अपरम्पार छ । जय कुर्सी !
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २२, २०७७, १३:५४:००
कोरोना जितेका ११ देश, नेपालले किन नसिक्ने पाठ ?
लकडाउन खोलौँ, व्यक्तिगत दूरी बढाऔँ